China Dengue Rapid Test Kit fekitari uye bhizimisi | ZVINOKOSHA
Iyo Dengue IgG / IgM Rapid Bvunzo ndeye lateral kuyerera immunoassay yekuona panguva imwe chete kuona uye kusiyanisa kweIgG anti-dengue virus uye IgM anti-dengue hutachiona muhunhu hwevanhu kana plasma. Iyo inoitirwa kuti ishandiswe nehunyanzvi seyedzo yekuongorora uye seyamuro mukuongororwa kwehutachiona nemavhaisi edengue. Chero chipi zvacho chinoita zvekuita pamwe neDengue IgG / IgM Rapid Test inofanira kusimbiswa neimwe nzira yekuyedza (s).
Dengue hutachiona, mhuri ina yakasarudzika serotypes emavhairasi (Den 1,2,3,4), ane imwechete-akamanikidzwa, akafukidzwa, akanaka-pfungwa maRNA hutachiona. Iwo hutachiona hunopfuudzwa nehumhutu hwemhuri-hunoruma mhuri yaSgegemyia, kunyanya Aedes aegypti, uye Aedes albopictus.
1.Chiketi chega chega chine zvishandiso zvekuyedza makumi maviri neshanu, imwe neimwe yakavharirwa muhomwe yezvinyorwa ine zvinhu zviviri mukati
2. 25 x 5 µL mini anodonhedza.
3. Mharidzo Diluent (2 mabhodhoro, 5 mL).
Chigadzirwa zita: Dengue igg / igm Rapid Test Kit
Zita Rekushandisa: GOLDEN NGUVA
Maitiro: Colloidal goridhe
Tsananguro: yakazara ropa / serum, kana plasma specimen
Kurongedza: 25 bvunzo / bhokisi
Nguva yekuverenga: 25mins
Pashure: LH Ovulation Bvunzo Strip
Zvadaro: Flu AB Inokurumidza Kwayedza Kit
Nhanho 1: Uya nemuenzaniso uye zviyero zvekuyedza kutonhorera remukati kana firiji kana chando. Sanganisa iwo mushe mushe musati wamboedzwa kamwe kanyungudutswa.
Nhanho 2: Kana wagadzirira kuyedza, vhura homwe pane notch uye bvisa chishandiso. Isa mudziyo wekuyedza pane yakachena, yakati sandara pamusoro.
Nhanho 4: Zadza iyo mini kudonhedza ine iyo specimen yekusapfuura iyo specimen mutsara sezvakaratidzwa mumufananidzo unotevera. Iyo vhoriyamu yeiyo specimen iri kutenderedza 5µL.
Ongorora: Dzidzira mashoma nguva usati waedzwa kana usiri kujairana newadonhedza. Kuti unyatsoita zviri nani, chinja chienzaniso nepipette inokwanisa kuendesa 5µL yehoriyamu.
Kubata mini inodonhedza yakatwasuka, govera iyo yose specimen pakati peiyo sampuli mushe (S mushe) uchiita shuwa kuti hapana mhepo dzemhepo.
Wobva wawedzera 2-3drops (angangoita 60-100 µL) yeSampuli Diluent nekukurumidza mukati meye buffer tsime (B tsime). 5µL yemuenzaniso kune S tsime 2-3 madonhwe esampuli anodzika B zvakanaka.
Nhanho 5: Seta iyo timer.
Nhanho 6: Verenga mhedzisiro mumaminitsi makumi maviri neshanu.
Usaverenge mhinduro mushure memaminitsi makumi maviri neshanu. Kuti udzivise kuvhiringidzika, rasa bvunzo mudziyo mushure mekududzira mhedzisiro.
NEGATIVE RESULT: Kana chete C bhendi riripo, kusavapo kwechero burgundy ruvara mune ese maviri bvunzo mabhendi (G uye M) kunoratidza kuti hapana anti-dengue hutachiona hutachiona hunoonekwa. Mhedzisiro yacho yakaipa kana isiri-inoshanda.
2.1 Kunze kwekuvapo kweC band, kana chete G bhendi rakagadzirwa, rinoratidza kuvepo kweIgG anti-dengue virus; mhedzisiro yacho inoratidza hutachiona hwapfuura kana kutapukazve kwehutachiona hwedengue.
2.2 Pamusoro pehupo hweC band, kana chete M bhendi rakagadzirwa, bvunzo inoratidza kuvepo kweIgM anti-dengue virus. Mhedzisiro yacho inoratidza hutachiona hutsva hwedengue hutachiona.
2.3 Kunze kwekuvapo kweC band, ese maG uye M mabhendi anovandudzwa, anoratidza kuvepo kweIgG uye IgM anti-dengue hutachiona. Mhedzisiro yacho inoratidza hutachiona hwazvino kana hutachiona hwechipiri hwedengue hutachiona.
Samples ine mhedzisiro mhedzisiro inofanirwa kusimbiswa neimwe nzira yekuyedza nzira (s) uye zvekuwana zvipatara zvisati zvaitwa sarudzo yakanaka
INVALID: Kana pasina C bhendi rakagadzirwa, iyo bvunzo haina kukodzera zvisinei chero burgundy ruvara.